इग्ल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, कसले जित्ला आज सिरिज? - Everest Dainik - News from Nepal
इग्ल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, कसले जित्ला आज सिरिज?
काठमाडौं, फागुन १८ । इग्ल्याण्ड विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । इग्लिस टिम सिरिज जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ८ः४५ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।
यस्तै, वेस्ट इन्डिज सिरिज बराबरीमा टुंग्याउने उद्देश्यका साथ भिड्दै छ । यसअघिका ४ खेलमा २ मा इग्ल्याण्ड र एक खेलमा वेस्ट इन्डिज विजयी भएको थियो । एक खेल भने वर्षाका कारण रद्द भयो । यस्तो छ दुवै टिमको अन्तिम ११ टिम-
याे पनि पढ्नुस इग्ल्याण्डविरुद्ध वेस्ट इन्डिजको शानदार जित